OKU OKU NA GAM AKPORO - N'IHI BEGINNERS - 2019
Ọ bụghị onye ọ bụla maara, ma enwere ohere iji mee ka na na mgbakwunye ụda ụda na mmụgharị, ọkụ ahụ na-enwusi: ọzọ, ọ nwere ike ime ya ọ bụghị naanị site na oku na-abata, kamakwa na ọkwa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, gbasara ịnata SMS ma ọ bụ ozi na ndị ozi.
Nke a nkuzi kọwaa otú iji flash mgbe ị na-akpọ gam akporo. Akụkụ mbụ bụ maka Samsung Galaxy phones, ebe ọ bụ ọrụ-arụ ọrụ, nke abụọ bụ maka otu smartphones, na-akọwa akwụkwọ free na-enye gị ohere itinye flash na oku.
Otu esi gbanye flash mgbe ị na-akpọ Samsung Galaxy
Gbanyụọ ọkụ mgbe ị na-akpọ na ọkwa ọkwa na ekwentị gam akporo site na iji ngwa n'efu
Ụdị nke Samsung Galaxy phones nwere arụmọrụ nke na-enye ohere ka flash gbanyea mgbe ị na-akpọ ma ọ bụ nata ọkwa. Iji mee ka o nwee ike, gbasoro usoro ndị a dị mfe:
Gaa Ntọala - Atụmatụ Pụrụ Iche.
Mepee Nhọrọ di elu ma wepu Flash.
Gbanyụọ ọkụ mgbe ị na-akpọ, nata ọkwa ọkwa na ọkwa mkpuchi.
Nke ahụ niile. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, n'otu mpaghara ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta nhọrọ "On-Screen Flash" - na-egbuke ihuenyo n'oge ihe omume ahụ, nke nwere ike bara uru mgbe ekwentị nọ na tebụl na ihuenyo na-eche ihu.
Uru nke usoro ahụ: ọ dịghị mkpa iji ngwa ndị ọzọ na-achọ ikikere dị iche iche. Mwepu nwere ike ime nke ọrụ ntọala ọkụ na-arụ ọrụ n'oge oku bụ enweghị ntọala ọzọ: ị nweghị ike ịgbanwe ọnụego ahụ, gbanye ọkụ maka oku, mana gbanyụọ maka ọkwa.
Ngwa ngwa ngwa iji mee ka ọkụ na-egbuke egbuke mgbe ị na-akpọ gam akporo
E nwere ọtụtụ ngwa dị na Ụlọ Ahịa Play na-enye gị ohere itinye flash na ekwentị gị. M ga-atụle nke atọ n'ime ha na nyocha dị mma, na Russian (ma e wezụga otu onye na Bekee, nke m masịrị karịa ndị ọzọ) na onye meriri ọrụ ha na nyocha m. Ana m achọpụta na ọ nwere ike ịchọpụta na ọ bụ na ngwa ekwentị gị na otu ma ọ bụ ọtụtụ ngwa anaghị arụ ọrụ, nke nwere ike ịbụ n'ihi njirimara ngwaike ya.
Flash na oku (oku na oku na oku)
Akpa nke ngwa ndị a bụ Flash Flash oku ma ọ bụ Flash na oku, dị na Ụlọ Ahịa Playplay na //play.google.com/store/apps/details?id=en.evg.and.app.flashoncall. Rịba ama: na ekwentị nlele m, ngwa ahụ amaliteghị oge mbụ mgbe echichi, site na nke abụọ na nke - ihe niile dị n'usoro.
Mgbe ị wụnye ngwa ahụ, na-enye ya ikikere ndị dị mkpa (nke a ga-akọwa na usoro) na ịlele nhazi ọkụ ahụ, ị ​​ga-enweta flash etinyeworị mgbe ị na-akpọ ekwentị gam akporo, yana ike iji atụmatụ ndị ọzọ, tinyere:
Zụlite iji flash maka oku na-abata, SMS, ma mee ka ihe ncheta nke ihe ndị a na-atụghị anya na-eme ka ọ na-ejigide. Gbanwee ọsọ na oge nke ncha.
Kwado flash mgbe nkwupụta site na ngwa ndị ọzọ, dịka ndị ozi ozugbo. Ma enwere njedebe: echichi dị maka naanị otu ngwa ahọpụtara maka n'efu.
Tọọ omume flash na ụgwọ dị ala, ikike ịgbanwuo ngwa ngwa, izipu SMS gaa na ekwentị, yana ịhọrọ ụdịdị na-agaghị arụ ọrụ (dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike gbanyụọ ya maka ọnọdụ ịgbachi).
Kwado ngwa ahụ na-arụ ọrụ n'azụ (nke mere na ọbụna mgbe ọ gbasasịrị ya, ọrụ ncha ọkụ ga-anọgide na-arụ ọrụ mgbe ị na-akpọ).
Na ule m, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. O nwere ike ịbụ na ọ dị ntakịrị mgbasa ozi, na mkpa ịme ka ikikere iji ijiji na ngwa ahụ anọgideghị na-edoghị anya (yana anaghị arụ ọrụ mgbe nkwụsịtụ nwere nkwarụ).
Oku oku site na 3w studio (Oku oku mgbasa ozi SMS)
A na-akpọkwa ngwa ọzọ dị otú ahụ na Ụlọ Ahịa PlayStation na Flash na oku ma dị maka nbudata na //play.google.com/store/apps/details?id=call.sms.flash.alert
Mgbe ị na-eleba anya na mbụ, ngwa ahụ nwere ike iyi ihe na-enweghị isi, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma, kpamkpam, ntọala niile na Russian, ngwa ngwa na-abịa ugbu a ọ bụghị naanị maka oku na SMS, kamakwa maka ozi dị iche iche na-ahụkarị (WhatsApp, Viber, Skype) ngwa ngwa dị ka Instagram: ihe niile a, dịka ụda ọkụ ọkụ, nwere ike ịmepụta n'ụzọ dị mfe na ntọala.
Nyochaa nkwụsịtụ: mgbe ị na-apụ ngwa ahụ site na ịsagharị, ọrụ ndị ọrụ na-akwụsị ịrụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, na ọrụ na-esonụ, nke a anaghị eme, ma ụfọdụ ntọala pụrụ iche achọrọ maka nke a.
Ntụle ọkụ 2
Ọ bụrụ na ịmeghị mgbagwoju anya site n'eziokwu na Flash Alerts 2 bụ ngwa na Bekee, ụfọdụ ọrụ (dịka ọmụmaatụ, ịtọ ntọala site na iji ọkụ na-amụnye naanị na ngwa ahọpụtara) akwụ ụgwọ, enwere m ike ịkwado ya: ọ dị mfe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbasa ozi, chọrọ ikikere kachasị , nwere ikike ịmepụta ihe ngosi flash dị iche maka oku na ọkwa.
Na mbipute free, ọ ga-ekwe omume iji gbanye ọkụ maka oku, ọkwa ọhụụ na nhazi ọnọdụ (maka otu mgbe), ịtọ usoro maka ụzọ abụọ, na-ahọpụta ụdị ekwentị mgbe arụ ọrụ ahụ (dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike gbanyụọ ọkụ na Silent ma ọ bụ Ụdị egwu. enwere n'efu n'ebe a: //play.google.com/store/apps/details?id=net.megawave.flashalerts
N'ikpeazụ: ọ bụrụ na smartphone gị enwere ike ịmeghe ọkwa site na iji ọkụ ọkụ, M ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkekọrịta ozi banyere ihe ika na ebe a na-arụ ọrụ a na ntọala.